Ny soavaly Berber, mampiavaka ny iray amin'ny tranainy indrindra | Soavaly Noti
Ny karazana soavaly Berber na Berber, dia teraka tany Afrika Avaratra y manana ny anarany amin'ny Berber avy any Maghreb, izay ifandraisany akaiky.
Tsy dia fantatra loatra ny niandohan'ny hazakazaka, saingy maro ny teoria ananantsika, ary mitovy hevitra daholo izy ireo, araka ny ho hitantsika any aoriana, fa efa teo isika iray amin'ireo hazakazaka mitovy antitra indrindra eto an-tany.
Ny teôria sasany dia milaza fa ny karazany dia avy amin'ny andiana soavaly masiaka tafavoaka velona tamin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry.
Amin'izao fotoana izao dia tsy azo hamafisina io teoria io raha marina na tsia, na izany aza, ny azontsika ianteherana dia ny valin'ny paleontolojika izay manamarika fa azo inoana fa ny hazakazaka Berber midina amin'ny soavaly dia izay nonina tany Afrika Avaratra lasa izay am-polony mahery an'arivony taona. Izany rehetra izany dia manamarina, araka ny nolazainay tao amin'ny andalana voalohany amin'ilay lahatsoratra, fa mifampiraharaha amin'ny iray amin'ireo karazan-trondro tranainy indrindra izahay. Inona koa, ny sasany sary hoso-doko hita ao amin'ny Alzeria, fampisehoana mitovy amin'ny morphology izay mitovy ny an'ny soavaly ankehitriny.
Ny asa soratra romana 2.000 taona mahery lasa izay dia efa niresaka momba ny "soavaly bararata"
2.1 Fifandraisana amin'ilay soavaly mitaingina Andalusia
Ny sasany amin'ireo toetra ara-batana ny hazakazaka miovaova arakaraka ny faritra izay onenan'izy ireo. Ny atsinanana lavitra ho izany faritra izany, lehibe kokoa ary matanjaka kokoa izy ireo no santionany amin'ny karazany. Raha raisina ireo angon-drakitra ireo dia afaka milaza isika fa amin'ny ankapobeny, ny haavony dia eo anelanelan'ny 145 cm sy 155 cm.
Etsy ankilany, mitazona zavatra maro izy ireo iraisan'ny rehetra tahaka azy loha lava sy karandoha tery (famantarana ny fahagolan ny karazany), ny sofiny manana habe antonony, ny vorombola mitongilanany somary ambany rambo.
ny faran'ny ny mahia nefa mahery ary miafara amin'ny fiarovan-doha matanjaka be. Ankoatr'izay, ny kitran'ity karazana ity dia mafy loatra ka tsy mitaky soavaly. Midika koa izany fa mila mandinika tsara an'ity ampahany manokana amin'ny anatomia an'ny hazakazaka Berber ity ianao. Ilaina ny manombatombana ny tany izay ihetsehan'ny biby matetika satria tsy izy rehetra no mamokatra akanjo mitovy. Ilaina ihany koa ny mitazona ny sahona (ny ampahany manaikitra amin'ny aroloha) hadio hatrany mba hahafahan'ny fiarovan-doha manamboatra ny fivelarana sy ny fihenan-dàlana tsy misy olana.
Ny palitao soavaly Barbary nentim-paharazana dia mainty na zaina, amin'ny lokony sy ny karazany mainty. Saingy, vokatry ny fiampitana tamin'ny hazakazaka arabo, ny lokon'ny volony amin'ireo equines ireo dia mety ho samy hafa be, ny mahazatra dia ny tordillo. ny volom-borona sy volo ny lava, matevina ary marokoroko.
Raha ny an'ny toetra, miatrika equine isika mora, mora ampiofanina sy harangue. Na dia toa kamo aza indraindray, dia equine mahay mandanjalanja sy be herim-po iza no mirehitra rehefa miantso azy ny mpitaingina azy.
Ankoatr'izany rehetra izany dia a tena henjana karazana. Zavatra ankasitrahana raha jerenao ny tontolo iainana an'efitra izay nitomboany. Manoloana toe-javatra ratsy toa ny hatsiaka, ny hafanana, ny hetaheta na ny hanoanana dia toa tsy reraka ilay soavaly Berber.
Heverina ho mariky ny fahamendrehana noho ny lalan-kalehany sy ny fomba onjan'ny mane rehefa mihetsika izy ireo, Izy ireo dia efa naterak'i Berber rehefa nandresy an'i Afrika Avaratra ny Arabo. Tsy nitaiza azy ireo ny Berber raha tsy nisy bebe kokoa, saingy nametraka tsara sy namolavola ny fomba fiompiana izy ireo.
Ny fahatongavan'ireo Arabo dia nanamarika fotoana iray lehibe teo amin'ny tantaran'ny soavaly Berber satria, niaraka tamin'izy ireo, dia tonga ireo soavaly arabo purebred. Zava-dehibe izany satria nanomboka tamin'io fotoana io dia niara-niaina ny roa tonta ary, niaraka tamin'ity, hazakazaka fahatelo no hiainga: fifangaroana eo amin'ny Arabo sy Berber.
Nanomboka tamin'izay, karazan-javamaniry telo lehibe an'ny mpiray tanindrazana ao Maghreb: ny karazana Berber, ireo Arabo feno rà ary ireo Arab-Berber.
Hatramin'ny andro taloha dia a karazana voaomana ho amin'ny ady, fihazana ary asa. Izy ireo dia naman'ny mpifindrafindra monina sy mpiandry.
Ny kalitaon'ny soavaly Berber, toy ny fanoherana mahatalanjona, dia nitazona noho ny fomba nentim-paharazana an'ny foko anaty tanety. Vitan'izy ireo ny mitazona ny toetra ilaina amin'ny soavaly fitaovam-piadiana ankoatry ny haingam-pandeha, haingam-pandeha na fakana ankeriny.
Vondron'olom-bolo tena sarobidy tamin'ny fandresen'ny silamo nanafika an'i Espana sy Frantsa.
Nalefa tany Eropa izy ireo nandritra ny taona maro. Voalaza fa tamin'ny 1850 dia nanome soavaly barbarà marobe ny Mpanjakavavy Victoria any Angletera ny Sultan of Morocco.
Hatramin'ny 1950, ny karazana "klasika" Berber dia nitahiry olona marobe. Saingy, taorian'io daty io dia nihena be ireo Berbera madio. Araka izany, tamin'ny 1987 ny Organisation Mondiale du Cheval Barbe dia natsangana tany Algeria hitahiry ny karazany.
Ny soavaly Berber dia nanjary soavaly fanatanjahan-tena tena tsara, ny anglisy ohatra mampiasa azy ireo amin'ny hazakazaka. Ankoatr'izay, ny toetra rehetra ananan'izy ireo dia mahatonga azy ireo a soavaly sarobidy tokoa hiampitana, satria izy ireo dia afaka mamindra ny zava-drehetra tsara momba ny karazany.
Ny fitaomana azy dia hita amin'ny hazakazaka maro ankehitriny toy ny Alzeriana, Toniziana na Maraokana.
Ankehitriny dia any Algeria, Maroc, atsimon'i Frantsa sy Espana izy ireo.
Fifandraisana amin'ilay soavaly mitaingina Andalusia
Mba hamaranana ity lahatsoratra ity dia te-hanonona kely ny fifandraisan'ity hazakazaka ity sy ny an'ny Soavaly Andalosiana.
Tsy vitsy ny manam-pahaizana Equine de hiantoka fa ny hazakazaka Berber no niaviany an'ny soavaly Andalosiana.
Saingy, etsy ankilany, misy ihany koa ny hafa manam-pahaizana mandinika de Soavaly Iberiana niainga tamin'ny faritra Andalusia tsy nahazo fitaomana firy tamin'ny hazakazaka Berber izy ireo.
Mety misy eo anelanelan'ny teôria roa ny zava-misy. Inona mazava es de Ny soavaly Iberiana sy Afrika Avaratra dia mifandray akaiky nandritra ny vanim-potoana talohan'ny tantara.
Ankoatr'izay, raha jerena ny fotoana nanafihan'ny silamo dia mazava fa samy mpihavana ireo firazanana roa ireo. Ny isan'ny spimika niampita ny Selat Gibraltar dia manan-danja amin'ny lafiny roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Ny soavaly Berber, mampiavaka ny iray amin'ireo tranainy indrindra